WhatsApp mechara gbakwunye ọchụchọ maka GIF site na Giphy | Gam akporosis
N'ikpeazụ, WhatsApp na-agbakwunye ọchụchọ maka GIF site na Giphy
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Noticias, Whatsapp
N'ụtụtụ a, anyị atụlewo ihe mgbakwunye ọhụrụ abụọ na WhatsApp beta nke gụnyere ịbawanye oke nke onyonyo kesara site na 10 ruo 30, yana naanị ịchọ mma ịchọ mma na vidiyo vidiyo. Ma obughi nani na o nogidere na akwukwo abuo a, ma nke-atọ apụtawo nke yiri ka a na-arụ ọrụ ya site na ihe nkesa.
Ma ọ bụ na o mechara webata ihe nchọta Giphy na WhatsApp. ọ dịkarịa ala maka oge ahụ na-atọ ọchị nke ukwuu ma na-enwe oge ụfọdụ.
Na mbu anyi nwere ike igbanwe vidiyo ma kesaa ya dika GIF, nke mere na mgbe e mesịrị, site na beta, GIF ndi echekwara na ebe nchekwa nke ngwaọrụ anyi ka ekesara. Mgbe ahụ onye ahịa weebụ ahụ gbakwunyere nkwado maka ọchụchọ GIF na ntinye, na ugbu a n'ikpeazụ, ọphu ikpe-azụ iya agbakwunyela gụnyere Giphy na WhatsApp.
Ugbu a i nwere ike chọọ ma zipụ gifs site na WhatsApp na ekwentị gam akporo gị dịka ị na-eme na Telegram, ngwa ahụ gosipụtara anyị na e nwere ụzọ ọzọ iji gosipụta onwe gị na ndị anyị na kọntaktị. Nke a pụtara na ị chọghị onye ahịa Giphy iche, ngwa Gboard ma ọ bụ nwee GIF echekwara na ekwentị gị.
Ọrụ a kuziri mgbe a na-agbanye bọtịnụ emoji aka nri na ederede ederede n'aka ekpe. Enwere bọtịnụ ọhụrụ na ala nke na-enye gị ohere ịgbanwe n'etiti emojis na GIF. Nwere ike ịchọgharị GIF ndị kachasị ewu ewu ma ọ bụ tinye okwu ọchụchọ iji chọta nke kachasị dabara na mkparịta ụka ahụ.
N'oge ahụ, ọbụlagodi na ịnwere beta mbipute 2.17.6 arụnyere, ọ bụ naanị pụtara na ọnụ ọgụgụ nwere ihe ùgwù nke ndị ọrụ. Agbanyeghị, wụnye ya bụrụ na. Echere m na ọ ga-abụ na nkenye ọnọdụ nke ikike a. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịma ozi ọma abụọ ndị ọzọ nke taa na beta, bia na ntinye.
Download ngwa nke ụdị beta nke WhatsApp
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » N'ikpeazụ, WhatsApp na-agbakwunye ọchụchọ maka GIF site na Giphy
Kedu mgbe ị ga-akwado imezi emoticons? Linedị Line ma ọ bụ onye ozi? Mgbe a ga-skins ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ịgbanwe agba na ugbua ma ọ bụ
Zaghachi Mercedes Saeta
Ọ dị mma, enwere ọtụtụ emojis karịa ka ọ dị, mana ihe ị na-ekwu ga-adị mma ... Agbanyeghị, ihe GIF bụ ihe a rịgoro ogologo oge ma ọ bụ maka oge ... na anyị nwere ike na WhatsApp!
Site n'ụzọ, ị nwere nhọrọ a n'ọrụ na WhatsApp gị? Enwetaghị m ya
Nokia ga-emepụta onye enyemaka ya nke akpọrọ Viki